Izongezo zePvc, iPvc yoBushushu boQiniso, iPvc Stabilizer-Aimsea
Aimsea Eyasekwa ngo-1997 kunye ikomkhulu ebhalisiweyo yuan million 20. Lishishini lesizwe eliphezulu-lobuchwephesha eligxile ekudibaniseni uphando, imveliso kunye nokuthengiswa kwezinto ezingekho yityhefu kwi-PVC ezizinzileyo. Izinto ezizinzileyo zisetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zePVC, ezinje ngocingo kunye nentambo, izixhobo zonyango zokudlala, iimveliso eziselubala, iimveliso zekhalenda, izixhobo zombhobho, amaphepha okuhombisa, izihlangu ezinamagwebu, iiprofayili zomnyango kunye nefestile, njl njl. iziqinisi ze-calcium calcium zinc. Inamalungelo awodwa omenzi wechiza ali-13 kunye nokusetyenziswa kwelungelo elilodwa lomenzi ongaphezulu kwama-30. Kukumgangatho ophambili wamazwe aphesheya wetekhnoloji yayo yepropathi enomgangatho wokuqonda. Ukuxhotyiswa ngophando lwenzululwazi kunye neqela lobuchwephesha, i-R & D yamazwe aphesheya kunye neziko lokuvelisa, kunye nokuzimela okuzimeleyo kunye nokhuphiswano, umgca wemveliso ozenzekelayo, amandla emveliso yonyaka yeetoni ezingama-40,000, ishishini lokuthengisa elisemgangathweni ophezulu, usebenze abathengi abangaphezulu kwe-500 .
Amava eminyaka engama-23
Ngaphezulu kwezicelo ezingama-30 zamalungelo awodwa omenzi wechiza
Inkunzi yezigidi ezingama-20 yuan
I-Eco-friendly non-toxic Stabilizers for calcium zinc anti-static resistant homogeneous PVC
Izinto ezingezizo ityhefu zokunyanga izixhobo zonyango ngaphakathi
Ukungazinzisi okunesifo sokuzinzisa kwi-Edge Trim ethambileyo kunye neFlexible PVC Gaskets
ipakethi enye yomfanekiso ozinzileyo
imibhobho & izixhobo
PVC somfanekiso mat ekrwada ...
Inkcazo yemveliso Isiplastiki esidityaniswe kwimatrix yePVC sonyusa ukuguquguquka kwayo phantse kulo naliphi na inqanaba elifunwayo kwaye sandisa kakhulu ubungakanani bezicelo zePlasticized PVC. Isetyenziselwa iityhubhu (ukutya, ezonyango), iiHoses (uxinzelelo, igadi, impompo), iigaskethi, iingcango zokujinga kunye neentsimbi zokubamba. Izinto ezizinzileyo zinokuqina kobushushu obuphezulu, ivumba eliphantsi, umgangatho ophezulu womoya ongaphakathi, ukuhambelana okuhle kunye neeplasticizers. Izinto eziluncedo Ukudibana ne-GB15593-1995 yonyango lukazwelonke; Kupasisiwe ...
Izinto ezinobungozi simahla ...
Inkcazo yemveliso Ngaphandle kweefilimu eziqinileyo ze-PVC, kukho ubungqina obukhulu bezicelo zeCazZ Stabilizer esekwe kwiifilimu eziguqukayo zePVC. Intengiso ilawulwa ziifilimu ezenziwe ngeplastikhi, nangona iifilimu ezibhetyebhetye ezingenasiphelo zingena kwintengiso. Ifilimu eguquguqukayo isetyenziswa kakhulu kwiifilimu zokulaminetha, iifilimu ezisongela ifilimu, ifilimu yokuzibamba, ifilimu yentengiso, iifilimu ezisongelayo, iifilimu zokurhangqa imoto, iifilimu zokuprinta, iifilimu zokutyikitya kwezithuthi, iifilimu zesixhobo sokudlala, iifilimu zonyango, ilaphu letafile ...
Inkcazo yemveliso Kumashumi eminyaka, iimveliso ezibonakalayo ze-PVC zahlulwe zangqongqo kwaye ziguquguquka, ezisetyenziswe kwizicelo ezahlukeneyo. Ngokwengxoxo zangoku malunga nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo kunye nozinzo, amacandelo entengiso exesha elizayo aya kujongana nemiceli mngeni ephambili. Iimveliso eziqukethe i-Tin, ezinye iindlela zokusombulula i-tin-free ziya kuba nzima ngakumbi. Kule meko, kufuneka unike ingqalelo kwimithetho eyahlukeneyo yezomthetho, enje nge-pharmacopoeia, ukutya ...
Ipakethi enye ishushu ...
Inkcazo yemveliso Ifilimu eqinileyo ye-PVC isetyenziselwa ukupakisha imveliso yamayeza ilungele ukupakishwa kwamacwecwe, iifomsile, inaliti, iisirinji kunye nezinye izinto zonyango. Kwaye, isetyenziselwa iithoyi, izixhobo, izinto zokubhala, izinto zokuthambisa, izixhobo, izinto zokutya, umhombiso, izinto zokwakha kunye nemizi mveliso eyahlukeneyo yokupakisha. Ezi bhanyabhanya zivelisa ikakhulu iiCa / Zn PVC Stabilizers njengoko inezinto ezihlala ixesha elide, amandla okuqina aphezulu, ubungqina bokufuma, ukumelana neinyembezi, akukho ...
Ubushushu beCalcium Zinc PVC ...
Inkcazo yeMveliso IPVC imibhobho ekhutshiweyo kunye ...
PVC Stabilizers ngenxa ca ...
Inkcazo yeMveliso Izinto ezizinzileyo ze-PVC ...
Ubushushu bokuqinisa i-PV ...
Inkcazo yemveliso Calcium Zinc ubushushu Stab ...
I-PVC Stabilizer ye-Irr ...
Ingcaciso yeMveliso yeCalcium Zinc yethu yePVC S ...
Ingcaciso yeMveliso yePVC Stabilizer / heat st ...
Ingcaciso yeMveliso yeCalcium Zinc Ukuqinisa ...
Umgangatho ophezulu wePVC Stabi ...
Ingcaciso yeMveliso IVinyl eguqukayo yive ...
Best PVC somfanekiso fo ...
I-PVC engeyiyo inetyhefu yokuzinzisa yeyona nto iphambili yokusebenza ephezulu, ebonakalayo ebonakalayo engenatyhefu ye-zinc esekwe kwi-PVC yokuqinisa ubushushu eyenziwe ngokudibanisa ngokwesayensi iikhompawundi ezingezizo ityhefu kunye nee-synergists ezizodwa. I-stabilizer yexesha elide lokushisa kwe-PVC engeyiyo inetyhefu inokusebenza kakuhle, kwaye indibaniselwano ...
Izibonelelo zeCa Zn Stabilizer
Okwangoku, izinto zokuqinisa ubushushu ze-PVC ikakhulu zibandakanya iityuwa ezikhokelayo, i-calcium edibeneyo kunye ne-zinc, i-tin ye-organic, i-antimony ye-organic, i-organic stabilizers zokuncedisa ubushushu kunye nezinto ezinqabileyo zomhlaba. Esona siphumo sikhulu kukuzinzisa kwetyuwa yesiko kunye neCa Zn someleza. Ca Zn somfanekiso oluhlaza ...
I-PVC Ubushushu boZinziso kwiFlexbile, I-PVC Isomisi soBushushu, PVC One Pack kungako, Izongezo zePvc, IPvc uzinzo, IPvc engeyiyo ityhefu,